Ny toetrandro any Karaiba mandritra ny taona
Jamaika - firenena, olona ary mozika
Barbados hahatsapa ho tsara
Ranomasina any Trinidad sy Tobago
Raha vantany vao manitsaka ny iray amin'ireo nosy any Karaiba ianao, dia hitsena anao eny amin'ny seranam-piara-manidina miaraka amin'ny mozika merenge, reggae na salsa ary fehezam-boninkazo ary ho tsapanao avy hatrany ny fahazavana izay avy amin'ny vahoaka. Raha mitady paradisa eto an-tany ianao dia aza mitady lavitra intsony, fa hitanao eto izany.
Izay tokony ho hitanao any Karaiba
Faly izahay manangona toerana vitsivitsy ho anao, hahafahanao mitondra ny kolontsain'ny firenena hody aminao ho fahatsiarovana ankoatry ny anton-diatra sy fahasalamana tanteraka.
Ireto misy zavatra vitsivitsy tokony ho hitanao any Karaiba.
Fialan-tsasatra any Karaiba - (c) malvorlagen-seite.de
Any amin'ireo nosy dia mazava ho azy ny morontsiraka fotsifotsy fotsy lava sy iray kilaometatra izay tsy manasa anao hilentika fotsiny, fa manompo amin'ny dia lavitra na zotra mihazakazaka koa. Anisan'ireo nosy tsara indrindra eran'izao tontolo izao izy ireo. Ny ranomasina mafana, madio, turquoise ary ny haran-dranomasina, trondro ary karazam-biby dia toa tsy voakitika tanteraka ihany koa.
Ho antsika eropeana, ity toetra toa tsy voakitika ity dia traikefa tena manokana izay tiantsika hiroboka am-po sy fanahy. Izany no mety tsy maintsy tsapan'i Robinson Crusoe tamin'izany fotoana izany rehefa tonga tany amin'ny nosy mitokana iray any Amerika atsimo izy ary nahafantatra tontolo flora sy zavamananaina iray vaovao sy tsy manam-paharoa.
Ho fanampin'izany, tokony hitsidika ireo tanàna sy tanàna naorina amin'ny fomba Karaiba ianao. Tsy misy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ity mampiavaka ny loko, ireo fofona hafahafa sy ity fomba mozika mampientanentana sy feno hafaliana ity dia hita amin'ny toerana iray. Any amin'ny nosy sasany, ny valan-javaboary voajanahary dia azo jerena ihany koa ho manintona an'i Karaiba, ny hatsarany dia voatahiry betsaka.
Raha ara-tantara dia afaka mianatra zavatra betsaka momba ireo nosy ao amin'ny tranombakoka ianao. Ireo trano fandraisam-bahiny sy masoivohom-pizahan-tany isan-karazany amin'ireo nosy dia manolotra fitsangatsanganana bus izay manarona ny fahitana ny nosy rehetra. Ka tsy mila manapotipotika ny atidohanao ianao ary avelao ny mpitarika hitarika anao ary hianatra bebe kokoa momba ny nosy, ny mponina ary ny fahitana azy. Manoro hevitra anao ihany koa ny tsy hitondra ny fiaranao any amin'ireo nosy. Na dia mpamily efa za-draharaha aza dia mihatra eto ireo fitsipika manaraka noho ny an'ny firenena eropeana.
Araho ny toro-hevitray momba ny dia fialan-tsasatra ary aza hadino ny fahitana any Karaiba.
Fahavaratra foana any Karaiba satria ny nosy Karaiba rehetra dia any amin'ny tropika. Ny toetran'ny Karaiba dia tsy mitovy amin'ny isan'ny nosy. Raha maharitra hatrany ny toetrandro ao amin'ny Lesser Antilles mandritra ny taona dia miova kely izy ao amin'ny Greater Antilles. Ny rivotra varotra dia manampy amin'ny fampihenana ny hafanana amin'ny haavon'ny zaka. Amin'ny ankapobeny, afaka milaza ny olona fa mihena ny mari-pana any amin'ireo nosy. Any an-tampon'ny tendrombohitra anefa dia tsy orana firy. Noho izany dia betsaka kokoa ny rotsakorana any atsinanana noho ny any andrefana.
Any Kiobà, ohatra, mafana be tsy azo zakaina atsinanana amin'ny fahavaratra, raha any amin'ny havoana avo any Jamaika, ohatra, any amin'ny Blue Mountains, dia matetika no mahazo mangatsiaka be.
Izay mandeha mankany Karaiba dia tokony hahafantatra ihany koa fa any amin'ny faritra misy rivodoza izy io. Matetika ny tafio-drivotra mahery no miakatra ambonin'ny rano mafana ary miteraka fahasimbana be miaraka amin'ny oram-be.
Ny vanim-potoanan'ny rivo-doza dia eo anelanelan'ny volana jona sy novambra fa tampon'ny volana septambra. Tsy ny nosy rehetra no iharan'ny rivodoza toy izany isan-taona. Raha te hisoroka rivo-doza ianao mandritra ny fialan-tsasatrao dia tokony handeha amin'ny faritra atsimo indrindra ianao, matetika ireo no azo antoka indrindra.
Satria hafanana hafahafa 27 degre C ny mari-pana mandritra ny taona, ny teboka voalohany amin'ilay fanontaniana: "Inona no ataonao any Karaiba?" Valiana haingana. Fitafiana landihazo maivana fotsiny matetika no ilainao. Ie, T-shirt, fohy, akanjo, zipo, tampon. Ny akanjo sy akanjo milomano tsy misy sarona dia mety ihany eny amoron-dranomasina. Voarara ny fandroana tsy misy loha na miboridana any amin'ny nosy rehetra.
Satria tsy te hihazakazaka toy ny homamiadana ianao mandritra ny fialan-tsasatrao, dia tokony tsy hadinonao ny maso-masoandro. Tsy maninona izay akanjo anaovanao. Satria tena tianao tokoa ilay fanontaniana: “Inona no ataonao any Karaiba? "Aza mamaly amin'ny:" hoditra mena ". Noho ny rivotra mahery indraindray, dia tsy hitanao ny tanjaky ny taratra masoandro, satria misy vokany mangatsiaka na dia 27 degre C aza. Satroka masoandro mifanentana ihany koa no atolotra anao eto.
Koa satria ny ankamaroan'ny trano dia misy fifehezana rivotra, tokony hanana palitao foana ianao, na eo aza ny hafanan'ny tropikaly. Rehefa dinihina tokoa, tsy te-handany ny fialan-tsasatrao amin'ny sery ianao, fa mankafy mandrakizay.
Amin'ny hariva dia tokony ho afaka mampita akanjo tsara tarehy koa ianao, indrindra any amin'ny trano fandraisam-bahiny lafo vidy na raha namandrika fitsangatsanganana an-tsambo any Karaiba amin'ny sambo tsara tarehy ianao. Palitao, pataloha lava, sns, no atolotra eto.
Tadidinao ve ilay sarimihetsika Dirty Dancing? Ilay sarimihetsika dihy malaza indrindra momba ny mozika avy any Karaiba sy ny dihin'izy ireo angamba. Ianao koa dia hitsena anao amin'ny mozika Karaiba taoriana kelin'ny hidiranao amin'ny seranam-piaramanidina Karaiba. Ny fiandrasana fialan-tsasatra mampihetsi-po mahatsikaiky dia mitombo bebe kokoa. Feno an'i joie de vivre izy ireo ary ny "Boppes" -ny dia tsy afaka mijanona miaraka amin'ireo gadona mafana sy mafana an'ny mozikan'i Karaiba.
Ny mozikan'i Karaiba dia tsy vitan'ny hoe manaparitaka toe-tsaina fialantsasatra eo noho eo, toe-tsaina tsara sy namana, fa samy hafa isan-karazany ihany koa. Ny andevo afrikanina koa dia namela ny asany, toy ny tompon'ny mpanjanatany anglisy, frantsay na holandey na mpandresy espaniola.
Ny mozika Salsa dia manintona amin'ny gadona mirehitra sy ny fihetsehana ara-nofo. Misy zara raha misy olona izay tsy te-hifindra avy hatrany amin'ity gadona ity. Tsy ho an'ny zava-poana fa ny sekoly fandihizana eto Alemana indray dia feno mianatra ity fomba fandihizana ity. Izy io angamba no mozika malaza indrindra any Karaiba.
Nipoitra avy tamin'ny fifangaroan'ny amponga afrikanina sy ny mozikan'ny mpitondra fanjanahantany eropeana. Ohatra, ny gitara dia manana ny lanjany ekena amin'ny hiran'ny gitara espaniola ao amin'ny flamenco.
Tonga tany Etazonia ilay zanakalahy kiobanina tamin'ny alàlan'ireo mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina teo ambany fitondran'i Fidel Castro. Nahazo aingam-panahy tamin'ny salsa New York ity. Mipoitra ny tena boom. Iza no tsy mahalala farafaharatsiny nahavoa ny tarika Buena Vista Social Club.
Noho ny fahafaha-mivezivezy amin'ny taonjato faha-20, ireo feo ireo dia nifangaro bebe kokoa tamin'ny feo amerikanina latina avy any Amerika atsimo sy ny mozika any Etazonia. Feo vaovao no nipoitra, toy ny mambo na cha-cha-cha.
Avy amin'ny nosy Trinidad sy Tobago izy. Fantatra sy tian'izy ireo izy ireo noho ireo feo karnavaly mafana ireo.
Izahay koa dia miantso ny reggae ho mozika Karaiba mahazatra, izay niainga avy tany Jamaika. Miaraka amin'i Bob Marley, izay maty tamin'ny 1981, dia misy mampifandray io fomba io avy hatrany.
Fa ny superstar ankehitriny dia avy any Karaiba ihany, toa an'i Rihanna avy any Barbados. Afangarony amin'ny soca, reggae ary dancehall ny feo farany.
Ity dia vitsivitsy monja amin'ireo karazana maro izay ho azonao any amin'ireo nosy Karaiba. Satria aiza no tsy tena marim-pototra kokoa ny mihaino an'ity mozika ity ary mihetsiketsika mifanaraka amin'ny feo toy izay amin'ny filentehan'ny masoandro amin'ny morontsiraka fotsifotsy amin'ny bara amoron-dranomasina misy ny fomba fijerin'ny hazo palma sy ny ranomasina amin'ny iray amin'ireo dokambarotra Barcadi maha-paradisa ireo. nosy.
Ny nosy atsinanana indrindra amin'ny faritry ny nosy dia Barbados. Ny faritry ny nosy Lesser Antilles dia ao amin'ny Oseana Atlantika. Barbados dia tsy avy amin'ny volkano toy ny nosy hafa, fa avy amin'ny tampon'ny vatosokay.
Barbados dia hitan'i Portoza Pedro Campos tamin'ny 1536. Ny fakany aviavin'ny aviavy, mampahatsiahy ny volombava, no nanome ny anarany ny nosy. Ny anarana Barbados dia adika amin'ny "volombava".
Ny morontsiraka tsara tarehy indrindra eran'ny Karaiba dia ny Bottom Bay any Barbados. Ny fahitan'i Barbados dia hita ao an-drenivohitra Bridgetown. Ny tanàna taloha manan-tantara sy ny faritry ny tobin'ny miaramila dia mendrika fitsidihana manokana.
Indrindra ny St. Nicholas Abbey, ilay trano tranainy indrindra any Barbados, izay efa nisy hatramin'ny taonjato faha-16, dia fahitana mahafinaritra hahagaga anao.
Ny ala tropikaly, izay saika nanakaiky ny nosy iray manontolo, dia nalain'ny fambolena fary sy ny tany voavoly ankehitriny. Ankehitriny dia mbola misy ala tropikaly efa ho 18 hektara.
Ny wildlife of Barbados dia anjakan'ny gidro, bitro, androngo ary manga. Ireo sokatra leatherback, izay tsy miakatra afa-tsy amin'ny ranomasina amin'ny alina, dia mametraka ny atodin'izy ireo amin'ny fasika fotsy amin'ny volana aprily sy mey. Fa ianao koa afaka mankafy voromailala, vorona sy voromahery eto.
Ny mponina any an-toerana, ny Barbadianina, dia miantso ny tenany hoe Bajan. Ny fiteny ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro dia ny ankamaroan'ny Bajan ary avy amin'ny anglisy. Ny fiteny dia tsy azo hadisoana omena amin'ny tenim-paritra kreôla. Ny fiteny ofisialy dia anglisy.
Ny mponina dia amin'ny ankabeazan'ny taranaky ny andevo afrikanina. Ny Indiana, ny Sinoa ary ny mulattos dia ampahany kely amin'ny mponina ihany.
Betsaka ny mponina no monina ao an-drenivohitra Bridgetown sy ny manodidina. Fa ny olona eo an-toerana dia hita ihany koa amin'ny morontsiraka atsimo sy andrefana ary amin'ireo ivom-pizahantany.
Ny toetr'andro nosy dia toetrandro tropikaly mando. Tsy dia misy fiovana ny mari-pana any Barbados. Miovaova ny mari-pana eo anelanelan'ny 24 sy 30 degre.
Ny mponina ao Barbados dia 290, ny antsasany mahery amin'izy ireo dia monina ao Bridgetown. Mainty ny ankamaroan'ny mponina. Ny fiteny colloquial dia Baja, Anglisy misy fitenim-paritra. Ny fiteny ofisialy dia anglisy. Ny ankamaroan'ny mponina dia Kristiana.
Ny harinkarenan'i Barbados dia ny fambolena, ny fanodinana ary ny fivarotana fary hatrany. Androany ny fizahantany no singa lehibe indrindra amin'ny fidiram-bolan'i Barbados. Raha ampitahaina amin'ny fanjakana Karaiba hafa dia manankarena i Barbados. Ny serivisy ara-tsosialy sy ara-pahasalamana dia mivoatra tsara. Noho ny tsy fisian'ny asa noforonin'ireo tompon-tany midadasika dia tanora maro manokana no mifindra monina any ivelany.
Ny nosy Karaiba atsimo dia miorina eo akaikin'ny morontsiraka avaratr'i Venezoela ary an'ny Lesser Antilles. Noho ny toetrany dia mizara ho vondrona atsinanana sy andrefana izy ireo. Ireo nosy roa dia manolotra endri-tsoratra roa samy hafa tanteraka. Be dia be ny torapasika any Trinidad. Misy fety foana any Trinidad.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny nosy Tobago dia nosy tony sy mandinika ary manome fialan-tsasatra madio ho an'ny mpitsidika rehetra. Ny renivohitry ny nosy dia Port of Spain miaraka amin'ny seranana mahafinaritra ary io no vavahady mankany Amerika atsimo.
Ny nosy Trinidad
Columbus no nahita ny nosy Trinidad. Tamin'ny 1498 dia niditra ny firenena tao amin'ny morontsiraka atsimo izy. Ny karana, ny Arawaks avy any Amerika atsimo, dia nonina tany Trinidad tamin'izany fotoana izany. Maherin'ny 4800 kilometatra toradroa i Trinidad no lehibe amin'ireo nosy roa. Ny tendrombohitra avo indrindra amin'ny fanjakan'ny nosy dia miakatra mihoatra ny 900 m. Any avaratra dia manolotra ala tropikaly ilay nosy ary any atsimo no ahitanao endrika ara-kolontsaina.
Ny Nosy Tobago
Ny nosy Tobago dia efa ho 40 km ny halavany, 12 km ny sakany ary 3000 kilometatra toradroa, ny kely kokoa amin'ireo vondronosy roa. Sary mahaliana ihany koa no atolotra anao ao Tobago. Be dia be ny tendrombohitra eto. Ny tendrombohitra avo indrindra dia manodidina ny 576 m. Faritra feno fasika sy fisaka no hita any atsimo andrefana, fa ny ilany avaratra kosa be vato ary mampiseho helodrano maromaro eo anelanelan'ny morontsiraka.
Nisy tahiry voajanahary nanomboka tamin'ny taonjato faha-18. Vorona hafakely hafahafa sy biby maro hafa no monina eto.
Ny morontsiraka any Trinidad sy Tobago dia malaza amin'ny fomba mozika calypso sy soca, izay noforonina tamin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny singa Hindu-Silamo sy Sinoa. izy ireo no toeran-kaleha ankafizin'ny mpitsangatsangana any Karaiba. Mendrika fitsangatsanganana ny morontsiraka mahafinaritra.
Ny zava-nisongadinan'ny taona tao Trinidad dia ny karnavaly, festival izay maneho ny hafalian'ny mponina. Ny Trinidadana be mponina dia namokatra natiora maro karazana miaraka amin'ny ala tropikaly, honahona amoron-dranomasina ary zavamaniry sy biby manan-karena. I Tobago kosa dia manintona ireo mpizahatany manana moron-dranomasina tsara tarehy eny amoron-tsiraka kely mahafinaritra. Ny ala voalohan'ny fiarovana dia manasa anao handeha hitsangatsangana eto. Ireo nosy kely manodidina ny morontsiraka any Trinidad Tobago dia manasa ireo mpitia fanatanjahantena anaty rano izay afaka mizaha ny tontolo anaty rano miloko ihany koa.
Iray amin'ireo toerana be fandroana malaza any Tobago dia Great Courland Bay, izay antsoina koa hoe Bay of the leatherback Turtles. Rehefa nilentika hatry ny ela ny masoandro, dia nivoaka avy tao anaty ranomasina ireo sokatra ary nalevina tao anaty fasika vovoka ny fihinany.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 29. May 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatraKeywords fetim-pianakaviana, Dia lavitra, Karaiba, Tsangatsangana, fialan-tsasatra, Verreisen
indray Lahatsoratra taloha: Qi Gong | Fahasalamana sy fahasalamana
more Lahatsoratra manaraka: Sekolin'i Waldorf | Safidin'ny sekoly